Itinye CMO gi na ahia ahia ahia gha akwu! | Martech Zone
A ọhụụ ọhụrụ nke Chief Marketing Officer (CMO) Council na Tealọm na-egosi na mmelite arụmọrụ azụmaahịa na azụmaahịa metụtara nwere usoro ụzọ maka ijikwa teknụzụ ahịa dijitalụ na ijikọ data ewepụtara site na ịba ụba akara aka ndị ahịa.
Aha ya Gosiputa otu I si adota, akụkọ ọhụrụ a na-enyocha ogo nke ndị isi ahịa na-echepụta atụmatụ teknụzụ ahịa dijitalụ ma na-eme ka ha dị n'otu ma na-ewepụta uru site na ịba ụba isi mmalite data ndị ahịa. N'ime ihe ndị dị elu, ọmụmụ ahụ kpughere:
42% nke CMO ndị nwee usoro ahia ahia ha nwere mmetụta ka ukwuu n’achụmnta ego karịa ndị nyere ọrụ.
Ndị CMO ndị ahụ nwere atụmatụ teknụzụ azụmaahịa akwadoro nyekwuo aka na mkpokọta ego ma jiri ihe okike kpọrọ ihe.
Ọkara nke CMO nwere usoro teknụzụ ahịa azụmaahịa nwere ike nweta ihe ezubere iche, ịrụ ọrụ nke ọma ma dị mkpa.
39% nke CMO nwere usoro teknụzụ azụmaahịa emere nweta oke nloghachi na nnabata nke imefu ego.
30% nke CMO ndị na-ejikwa ma jikọta teknụzụ nke ọma ma ọ bụ nke ọma ịhụ uru azụmahịa bara uru, jiri pasent 51 nke ndị ahụ inwetakwu onyinye buru ibu.
The zuru ezu akụkọ dị ka ibudata taa maka $ 99. Enwere ike ịchọta nchịkọta nchịkọta nke nchịkọta.
Tags: uru azụmahịacmo kansulaka ndi ahiateknụzụ ahịa dijitalụego ahia ahiateknụzụ ahịanghazi teknụzụ ahịaahịa teknụzụ laghachiri na ntinye egoahia teknụzụ atụmatụlaghachi na ntinye ahia teknụzụ ahịaEgoonyinye ụtụROIezubere iche maka ndị ahịaTealọmịdị n'otu
Ọkt 23, 2014 na 10:38 AM
CIO vs CMO na CMTO nwere teknụzụ na - enweta ọtụtụ airplay, dịka o kwesiri. Ana m ahụ CMO ole na ole nwere ikike atụmatụ dị mkpa, ma ọ bụ ihe ọmụma ọgbara ọhụrụ iji jikwaa nchịkọta ha. Dị ka ị gosipụtara, otu n'ime nsogbu kachasị bụ njikọta. Nke ọzọ bụ njikwa data. Ọzọkwa, ahụrụ m ọtụtụ ngwa ọfụma nke CMO na nsogbu / ohere na-enweghị eserese usoro ahụ, mmetụta ndị ahịa, nka dị n'ime, ma ọ bụ ọdịnaya chọrọ. Enweghị ndị ọkachamara nwere nkà bụ nnukwu nsogbu ugbu a.
Echere m na CIO nwere ike ịbụ ezigbo onye mmekọ site na usoro a. iso CMO na-emekọrịta ihe iji nye ndụmọdụ na nduzi otu esi aga nke ọma. Ọ bụghị okwu mpaghara, n'akwụkwọ m. Azụmahịa ahụ meriri na njedebe, ọrụ abụọ ahụ ga-erite uru.
Nice infographic na stats!
Ọkt 23, 2014 na 9:55 PM
Enwere m nkwenye, Brian. Echere m na ebe m dị iche bụ na CMO kwesịrị inwe ihe ọmụma ọrụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, onye na-ekesa ahịa ekwesịghị ịghọta etu esi edozi ụgbọ ala mana ọ nwere ike na-arụ ọrụ lọjistik ma hụ na ezigbo ndị ọrụ nọ n'ọnọdụ iji rụzuo ọrụ ahụ. Isi ihe dị ebe a, n'echiche m, bụ na ebumnuche na ebumnuche nke CIO anaghị agakọ na CMO. Na ahụmịhe m, ndị ọkaiwu ndị anyị na ha rụkọrọ ọrụ egbochila ọganihu n'ọtụtụ nzukọ n'ihi na ebumnuche ha bụ nkwụsi ike na nchekwa. Ọ bụ ezie na ndị ahụ dị mkpa na nzukọ, enwere ike mezuo ha mgbe ị na-agbaso azụmaahịa na ịzụ ahịa kacha mma. Ọ na-agbadata na ajụjụ ma ndị otu teknụzụ gị ọ bụ nwere ike ime otu… ma ọ bụ a enweghị ike ime otu. Otu ụzọ ọzọ isi mezie nke a bụ ịnwe ndị isi ndị ahịa na ndị isi na nzukọ gị organization ebe CMO bụ onye ahịa nke CIO ma nwee ntinye na ọkwa nke ihe ịga nke ọma.